Marxuum Yuusuf Bari Bari oo lagu aasay Garoowe “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Allaha u naxariistee Danjirihii Soomaaliya u fadhiyay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa maanta gelinkii dambe lagu aasay magaalada Garoowe ee xarunta Gobolka Nugaal, hakaasi oo ay ka qeyb galeen wafdi ka socday Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo madaxda Dowlad goboleedka Puntland.
Sidoo kale aaska marxuumka waxaa ka qeyb galay isimo, waxgarad, aqoonyahanno, ehelada Marxuumak iyo mas’uuliyiin kale, oo horey ugu sugnaa magaalada Garoowe, iyadoo markii meydka laga dejiyay garoonka diyaaradaha ee Garoowe halkaasi lagula tukaday Salaaddii Janaasada.
Madaxweynaha Dawlad goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa alle uga baryey marxuumka in janadii fardowsa uu ka waraabiyo, kitaabkiisana uu gacanta midig uga dhiibo, samir iyo iimaan buuxana Alle uu ka siiyo dhammaan Umnadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Puntland, ehelkiisi iyo asxaabtii uu ka baxay.
”Yuusuf waxaa uu ahaa Danjire qaran, waxa uu ahaa howlkar, waxa uu ahaa nin daacad u ah Soomaaliya, jecel Soomaaliya in ay isbadasho jecel Soomaaliya in ay meel fiican gaarto, wakhtigiisa inta badan howshaa qaran ayuu ku biyey, waxyaabaha runtii uu caanka ku ahaa oo dadka Soomaaliyeed aysan ogayn oo isaguna mar walba ku dadaali jiray waxa ay ahayd ilaalinta xaquuqul insaanka” ayuu yiri Dr Gaas.
Mudane Cabdiweli Gaas ayaa ku baaqay in muhiim tahay in meel looga soo wadajeesto cadowga dilaya bulshada kuwooda waxgalka leh ee caadaystay daadinta dhiiga Ummadda Soomaaliyeed.
Khaalid Cumar Cali Wasiiru-dawlaha Arrimaha Dibadda oo ka mid ahaa wafdiga ka socday dowladda ee aaska ka qeyb galay aya sheegey in Marxuumka uu qeyb lixaad leh ka qaatay arrimaha xuquuqda aadaha, isla markaana uu ku guuleystay in Soomaaliya ay saxiixdo heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha.